Club Lamengameli Tunisian Village 3 * (Tunisia, Hammamet): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Uma nganoma isiphi isizathu wokuphumula into iyiswe kusukela ehlobo ekwindla, akusiyo isizathu sokuphelelwa yithemba nemizwelo ukuphumula ngeke aphumelele. Ngokuphambene nalokho, kukhona ithuba lokuya emazweni lapho kuwa kumnandi ngempela iqala. Ngokwesibonelo, e-Tunisia. izindaba ezinhle kakhulu lithi izinkambo ezweni ngo-Okthoba ezishibhile kwezinye nezikhathi.
Izimo zezulu e Tunisia ngo-Okthoba
Isimo sezulu e Tunisia ngo-Okthoba kunalokho evumayo ukwamukela izivakashi eziningi lapha.
Nokho, isimo sezulu nakwezifudumele kulezi zindawo, zikhona izikhathi lapho imvelo inika abantu ithuba ukuthatha ikhefu elangeni elishisa bhe futhi ujabulele obupholile ivela amagagasi ulwandle. Manje kubhekwe ukuphakama isizini isiqongo Tunisia. Lo moya, sibonga elithambile, efanelekayo kulabo holidaymakers abaphethwe izifo eziphathelene nenhliziyo yamaphaphu, futhi nje kulabo awukwazi ukubekezelela ngokuphazima kweso lapho izinga lokushisa emoyeni. Ngaphandle kwakho konke lokhu okungenhla, e uhambo kule nyanga ukuze Tunisia kungcono ukuba bathanda imibhangqwana eshadile futhi enabantwana, njengoba ingozi yezinkinga sezulu lithathelwe ngalesi sikhathi incane. Isimo sezulu e Tunisia ngo-Okthoba, akahlukile ukuqinisela, engesiyo nezinyanga zasehlobo, uma kukhona ukwanda monotonic e lokushisa futhi anda nomswakama. awokuthi kakhulu semali imvula phakathi nalesi sikhathi. Ukubikezela okwamanje lapho ilanga disk izovela futhi emuva yonke inkazimulo yayo futhi bazise efudumele, cishe ngiyaphupha.
Ikakhulukazi iholide ukuwa
Ngokwezibalo, cishe maphakathi no-Okthoba, amafu ukuhlakaza kanye kwelanga uya kokwenza isendleleni eya baphume. Nokho, ngokushesha nje lapho kuza kweshumi lesithathu enyangeni, isimo sezulu izinguquko ezinkulu kanye namafu uthola mkhulu. Yingakho labo izivakashi abangabhalisile kakhulu enamathiselwe isikhathi, kungcono ukuba amise usuku maqondana nengxenye ka-October yesibili. Njengoba Bathi abasebenzi gidrameteotsentra, kulo nyaka kulindeleke ukuthi ingqikithi yenza u-9 lina aphume sonyaka. Djerba Isiqhingi nasenyakatho Tunisia abhekwa ezindaweni ezinemvula eningi kunazo zonke, bese ne nomswakama izinto ezikhathini ezinzima kakhulu. Njengoba for amagugu lokushisa konke wahlela kancane ehlukile. Djerboue Mahdia futhi ezinsukwini zokuqala 10 lwenyanga ngiziqhayise lokushisa + degree angaba ngu-28-30, kanti owokugcina uyoba ngo - kusukela degrees 25 kuya ku-28. Kusihlwa izinga lokushisa lehla kuya degree angu-24. Esondela North, ungabona ukuthi izinkomba lokushisa izikhathi ngezikhathi ukuthola njalonjalo. Uma kuziwa Sousse, Monastir futhi Sofakse, khona-ke thermometer ikholomu liphakama ezingxenyeni isiqondiso igebe 24 futhi degrees 26. Kusihlwa, ikholomu sivuswa degrees 18 kuya ku-20. Ngokuphathelene dolobha ke izinga lokushisa 2-3 degrees ephansi, futhi kusihlwa zonke kufanele bagqoke izingubo ezifudumele, njengoba ukubanda kuze kufinyelele 15-16 degrees. By the way, ngakolunye zokungcebeleka lamazwe South kule nkathi, abahambi futhi kudingeka kancane ukufudunyezwa kusukela ngo-Okthoba ku ala maqembu yisikhathi imimoya, okuyizinto futhi ekhuthazayo. Ntambama sezulu ezingenzeka ngokuzumayo ukuwohloka, futhi, kodwa hhayi ngokwanele ukuqala ukuze sikhathazeke ngayo. Kukuziphi izici Tunisia uhambe? Kukhona zokungcebeleka eziningi ezinhle, enye yazo ye Hammamet.
Incazelo the resort
Idolobhana resort of Hammamet itholakala amakhilomitha 70 kusukela Tunisian. Lokhu edolobheni ebukekayo yakhiwe ngendlela Muslim, isici esiyinhloko okuyinto khona okusezingeni eliphezulu igolide domes. Zone ukuthola abahambi Hammamet welulela ibanga elilingana cishe 14 amakhilomitha. Uhlangothi enyakatho yedolobha izungezwe edolobheni okuthiwa Nebel.
Amahhotela e Hammamet
Hammamet idume khona amahhotela angaphezu kuka-110, eziningi amakamelo esesikhundleni mayelana 40,000 izipesheli. Lokhu resort irekhodi isikhathi ekwandiseni ibhizinisi futhi ensimini khulula, ngokwezwi nezwi okusho "ngokukhulu ukushesha," kukhona yisiphephelo entsha kwezivakashi. Ekhatsi Hammamet, abezinye izizwe zaqala senqene ezikude 1920. Phakathi nale nkathi, yokungcebeleka nesithakazelo sina e osaziwayo, izibalo etemibhalo abantu abacebile. Kakhulu uyakuthanda kule ndawo umndeni ocebile Rothschild, ngubani ngisho wakha villa khona. Kusukela ngawo-60, kule ndawo seziqale ezokwakha izakhiwo hotel ne ezihlukahlukene amazinga inkanyezi. Isikhathi esiningi esakhiwe amahhotela kusuka 2 kuya 5 izinkanyezi, asebethathe futhi zithatha namanje ngisho izivakashi zakwamanye amazwe.
Ihhotela Club Lamengameli Tunisian Village 3 *
Leli hhotela emangalisayo Itholakala Enyakatho Hammamet. Eduze kunensimu ivulekile for umdlalo we igalofu kanye ebhishi yangasese, ifakwe konke ababekudinga ukuze ukuphumula ukhululekile. Eduze beach ipaki elihle eziningi ukuzijabulisa izingane, ngenhlanhla, ufika edolobheni eziningi. Indlela esuka epaki amanzi ephakathi okuyingxenye Hammamet cishe 6 amakhilomitha. Yonke ehhotela eziyinkimbinkimbi siqukethe kwesinye isakhiwo beya 5 phansi futhi original, kodwa ngesikhathi esifanayo Bungalows ukhululekile kakhulu futhi Airy ukuthi chithi saka impahla, futhi sizungezwe zasemazweni. Omunye kwempahla eyinhloko Club uMongameli yehhotela kanye Village Tunisian 3 * - isibalo amakamelo.
Ukuze amasevisi izivakashi avele 67 ivulekile guest amakamelo, ngalinye elikwazi, ngisho kungakhathaliseki ekilasini kanye nezindleko, it has a emphemeni nezinezingadi ukubukwa ebabazekayo. Igumbi ngasinye iyashintsha iyaphupha ibe shades, okuyinto umphelelisi kakhulu ukukhanya amakamelo zemvelo. Sengqondo amakamelo hhotela banganhlanhlatsi ezahlukene nenduduzo.
Njengoba umsoco, ihhotela linikeza 2 zokudla cuisine Tunisian futhi Yurophu, lapho emkhathini party wenduduzo futhi aziphumulele.
Ihhotela has amachibi ezintathu ekujuleni ezahlukene, enye yazo izingane, kanti eyesibili ifakwe abadala kanye nabantu abadala, futhi eyesithathu kufanelekile bonke ngaphandle kokuvinjelwa. is Kugcine ngisho pool ifakwe impophoma ezincanyana okungangabazeki ukuthi, uyokhanga a lot of ukunakwa.
Impahla ebaluleke kakhulu Club uMongameli yehhotela kanye Village Tunisian 3 * - ebhishi. Lena akuyona kuphela indawo amaningi bethamele ilanga.
Leisure amaholide kubantu lolwandle wadala izifundo ezikhethekile sokuthuthukiswa dance Dominican ngokuthi bochata, futhi, kukhona platform esilungele asebenzayo ibhola imidlalo (football, volleyball, i-baseball, njll). Usuku ngalunye izivakashi Club Lamengameli Tunisian Village 3 * (Hammamet) balinde imincintiswano okuthakazelisayo futhi ukuzijabulisa ukuthi angeke akushiye noma ubani nesithukuthezi. Lemisebenti usuku lonke futhi iyokapakela nakuzo kusihlwa, kuze kuhlwe. Isikhathi esining impela labetibambile kumnandi imincintiswano futhi sweepstake imiklomelo bekhohlisa, esikhuthazayo. Edolobheni ebusuku yehla, intsha bavame ukuvakashela disco ezivulekile namaqembu nge eziphumulele umculo cocktail.
Esizeni Club Lamengameli Tunisian Village 3 * (Tunisia) kanye eduze, amaholide ungathola isikhumbuzo izitolo, okuyinto ukuthengisa yazo zonke izinhlobo zezinto ezincane, enikeza inkumbulo sezinsuku kahle esetshenziselwa. Kulezi izitolo ungathola yezandla ngezinto zemvelo, zasolwandle, amakha zendawo, utshwala nokunye. Ngokuvamile, kukhona konke mayelana nokuthi yini kuphela baphupha. Phakathi kwezinye izinto, eduze izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo ingatholakala esitolo ubucwebe, ihhovisi inhlangano ka uhambo uhambo, futhi encane, kodwa nazo zonke ezidingekayo self-service esitolo.
It inikeza izivakashi Ihhotela Club Lamengameli Tunisian Village 3 * inthanethi wireless, igumbi umthwalo, ukubhaliswa inkonzo izakhamuzi ezintsha, esiqashwe ubusuku nemini, futhi yokupaka khulula. Zibonisa lift ngesivinini futhi uhlobo lwemali. Kukhona esitolo isikhumbuzo kanye ngokusibeka ensimini enhle nge ezihlukahlukene landscape design izibalo.
Ezemidlalo kuleli hhotela ngeke ahlale ngaphandle ukunakwa: inikeza amaholide ukudlala emzuliswaneni igalofu, inkantolo lomphebezo, i-ride on endaweni ngamabhayisikili. Kukhona ejimini. Kukhona windsurfing, ogibele ihhashi, volleyball ne-basketball.
Emkhakheni isakhiwo ibhizinisi, ihhotela Club Lamengameli Village Tunisian 3 * inikeza amagumbi evulekile. Futhi onobhala abanolwazi zingenza sisahlela izincwadi ezibalulekile ngefeksi.
Igumbi izindawo zihlanganisa: eshaweni, yangasese, usinki, TV kunothile iziteshi ulwazi, ibha amancane, isiqandisi futhi uhlelo lokulawula sezulu (air conditioning). Amagumbi abathukuthelela phakathi nenkathi ebandayo.
Kuyaphawuleka ukuthi ngaphandle abavamile ehhotela amafulethi babe nazo lezo aguqulelwe izivakashi abanokukhubazeka. Ngaphezu kwalokho, kukhona igumbi umndeni ehhotela.
Ekhuluma ezokuthutha, kuyafaneleka kokukhuluma khona inkonzo Shuttle nezimoto eziqashisayo. Ukuze afeze yokuhlanza izingubo ezivela ndawo, kuzwakala futhi enenhlabathi, ungasebenzisa Ilondolo kanye nezakhiwo zamahhovisi ezomile yokuhlanza amasevisi.
Kusukela ukuzijabulisa ngesikhathi uMongameli Club futhi Village Tunisian 3 * amaholide Karaoke isehlane ibha, ikamelo Billiard, nightclub futhi uhlelo nokungcebeleka. Kubalandeli ukuhlola ukunemba ehhotela ifakwe imicibisholo kanye okuqondiswe imicibisholo.
Engxenyeni lensikazi labantu ihhotela inikeza amasevisi ubuhle, massage yaba nazo zonke izinhlobo massage and salon izinwele.
Ezinganeni Club Lamengameli Village Tunisian 3 * enikeziwe ichibi ehlukile, imidlalo Igumbi nge ngophethe futhi ezihlukahlukene amathoyizi, embhedeni wezingane egumbini ngalinye, club yezingane.
Ukufinyelela ihhotela Kulula, nje kuphela ukudlulisela itekisi ashayele aye Hammett. Ngaphambi Karthadzh Airport ibanga ingamakhilomitha angu-62 kuphela ngemoto. Eduze kukhona ihhotela ngokuthi Magic ukuphila Manar.
Izibuyekezo izivakashi yehhotela
Okuvelayo esiningi omuhle ka Ihhotela Club Lamengameli Village Tunisian 3 *. Izibuyekezo bathi abantu abafana layout imishini eyinkimbinkimbi kanye ikamelo, efana ingqalasizinda. Libuye kakhulu kahle waphumula abasebenzi ukukhuluma yesevisi yokubhalisa, Inhlonipho okuyinto ejabulisa njalo. Lo mbhalo uthi ukuba khona izithombe zezingane, okuyinto, ngeshwa, kumenyezelwa kuphela isiFulentshi, kodwa akusho konakalisa umbono kunoma isiphi isimo. Kubantu abadala ehhotela njalo kusihlwa ukuqina amakilasi, amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela, elula yokuzijwayeza inqubo evamile, amanzi polo kanye ithenisi. Vala leli hhotela epaki amanzi, Ukuvakashela okuyinto omdala izobiza okuyisilinganiso sabangu-18 dyne, futhi izinyane isidingo 14 ukukhokha kanye. Ihlola Phonsa is hhayi Kunconywa, njengoba akuvunyelwe elibukhali njalo ihlolwe kusengaphambili. Ikakhulukazi umxhwele uMongameli Club futhi Tunisian Village 3 * yokudlela. Ukudla mkhulu ehhotela, eziningi ezihlukahlukene izithelo, amasaladi, kanye nesobho. Ukunikeza yogurt zemvelo, okungase exutshwe sezimoto ahlukahlukene futhi isagcine, kuvela emangalisayo okumnandi. Ibhishi nokuhlanzeka kumangaza futhi izinga lenkonzo.
Ukuze ujabulele kokuhlala kwawo kuleli hhotela izinsuku 5 ushiye kancane kakhulu. Uma ufuna ukuphumula okuhle, udinga ukuya khona okungenani izinsuku ezingu-10.
Izinkinga komnikazi ingekho, njengoba reception usebenza njengomfula iwashi. Faka endaweni Bungalow enhle ngenhloso coast noma engadini ulwandle. Ngokuvamile, isithombe ukushayelwa olunothile. Room service njalo ngesikhathi futhi avulekile. Qasha imoto ezishibhile, bajabule kakhulu, ngoba ngaso sonke isikhathi ufuna ukuba ubone yonke imininingwane. Souvenir izitolo cishe kuyo yonke ithuba, amanani ezinhle. Njalo ekuseni egumbini izimbali fresh kanye amathawula ka ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi uyisontile. Indlu yangasese egumbini is banzi yokugezela yangasese, zonke izesekeli lapho.
Ngokuvamile, Ihhotela Club uMongameli Tunisian Village - Inkanyezi ehhotela aphakeme. Lena indawo enhle kulabo bengajwayele uphonsa imali eholidini, kodwa ukhetha induduzo. amaholide Ibhajethi phesheya isiyatholakala wonke umuntu. Ikakhulukazi uma ukhetha off-inkathi lesi sikhathi.
Ihhotela Amwaj Blue Beach Resort Spa (Egypt / Soma Bay). Izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela La Bahia Principe La Romana 5 * (Dominican Republic / La Romana): izithombe kanye nokubuyekeza
Amahhotela eshibhile Odessa: ikheli, incazelo, ukubuyekezwa
Heat-obonisa ifilimu: incazelo, ukusebenza kahle
Kuye kwanyatheliswa izincwadi ukulungisa Skoda Octavia A5
Ngo-2011, kuyoba ukwandisa impesheni lempi.
Kungani kunezinkolo eshayisana phakathi komzali nengane? Singabonisa kanjani ukuthi ukuzixazulula
Bite: izinhlobo kanye nezimbangela zokuphulwa, ukulungiswa kokuluma ngaphandle kwama-braces
Indlela ukukhetha izipikha emotweni?
Ebusuku club "Crazy Daisy", eMoscow: ngezibuyekezo nezithombe
Flower nge amajikijolo e-orange - siqoqa iqoqo